Israel oo Kenya kala shaqeyneyso ka hortaga weerarada Al-Shabaab - iftineducation.com
iftineducation.com – Danjiraha Israel u fadhiya dalka Kenya Amb. Shallom Charles Cohen ayaa sheegay in Dowladda Kenya ay ka taageerayaan dagaaladda ay kula jirto dhaqdhaqaaqa Ururka mayalka adag ee Al-Shabaab. halkan ayuu ka sheegay Danjiraha shir jaraa´id oo uu ku qabtay magaalada Nairobi.
Danjire Shallom Charles waxa uu shaaciyay sidoo kale in Kenya ay kala shaqeynayaan ka gudbidda Khataraha dalkeeda ay ku heyso Xarakadda Al Shabaab.
ShalomCohensraelSido kale Danjiraha waxa uu yiri ”dalka Kenya waxa uu u baahan yahay inuu dib u habeyn ku sameeyo ammaankiisa ma ahan oo kaliya in ciidamo loo daabulo Xadka dalkasi uu la wadaao Soomaaliya balse waa in la baaraa dhaqdhaqaaqyadda Argagixisadda ee ka dhacaya Dalka Kenya.